Bit By Bit - tijaabo Orodka - 4.5 Samaynta waxaa dhici
Xitaa haddii aadan ka shaqeeyaan shirkad casriga weyn aad ordi karaan tijaabo digital. Waxaad sidoo kale waxa aad naftaada ama wehelkaagu sameyn karo qof ku caawin kara (oo ku caawin kara).
By marayso, waxaan rajaynayaa in aad ku faraxsanahay oo ku saabsan fursadaha sameeyaan tijaabo digital adiga kuu gaar ah. Haddii aad ka shaqeeyaan shirkad casriga weyn aad laga yaabaa in mar hore la sameeyo tijaabo, kuwaas oo waqtiga oo dhan. Laakiin, haddii aadan ka shaqeeya shirkada casriga ah aad u malaynayso in laga yaabo in aad soo ordi karaa tijaabo digital. Nasiib wanaag, in qalad, yar-abuurka ah iyo shaqo adag, qof kasta ordi karaan tijaabo digital.
Sida talaabadii ugu horeysay, waxa fiican in la kala saaro laba siyaabood: waxa aad naftaada u samayn ama shuraako la awood ah. Markaasaa, waxaa jira xataa laba siyaabood oo kala duwan in aad naftaada u samayn kartaa; aad tijaabinayo karaa deegaano hadda, dhisi aad tijaabo gaar ah, ama dhisi alaabta kuu gaar ah loogu talagalay tijaabo soo noqnoqda. Waxaan muujinaya doonaa, kuwaas oo wajiyada badan oo tusaalooyin hoose, iyo inta aad wax baraneyso iyaga ku saabsan waa in aad aragto sida hab kasta wuxu bixiyaa ganacsi-offs oo ay la socdaan afar cabbir oo waaweyn: qiimaha, gacanta, xaqiiqo, iyo anshaxa (Jaantuska 4.11). No hab waa ugu fiican xaaladaha oo dhan.
Jaantuska 4.11: Kooban ganacsiga-offs waayo siyaabo kala duwan oo aad samayn kartaa tijaabo dhici. By kharashka waxaan ula jeedaa kharash in cilmi loo eego waqti iyo lacag. By gacanta waxaan ula jeedaa awood u leeyahay inuu sameeyo waxa aad rabto in la eego ka qayb galayaasha shaqaalaynta, randomization, bixinta daawaynta, iyo cabirka natiijooyinka. By xaqiiqo waxaan ula jeedaa ilaa xadka ay deegaanka go'aanka kulan kuwa kala kulantay nolol maalmeedka, la soco in xaqiiqo sare ma aha had iyo jeer muhiim ah in aragtiyaha imtixaanka (Falk and Heckman 2009) . By anshaxa waxaan ula jeedaa awoodda cilmi ujeeddo wanaagsan si ay u maareeyaan caqabadaha anshaxa in kac laga yaabaa.